Google Maps na-agbakwunye oyi akwa Street View na ngwa ahụ, anyị na-egosi gị otu esi arụ ọrụ | Gam akporosis
Google Maps aghọwo ihe karịrị afọ ndị kacha mma ngwa ịnyagharịa obodo ọ bụla, chọta ọnọdụ, jiri anya nke uche hụ ebe ị na-aga ... Ekele maka nhọrọ dị iche iche ọ na-enye anyị na nke agbakwunyere ọhụrụ.
Mmelite kachasị ọhụrụ nke Google Maps na-agbakwụnye a ọhụrụ oyi akwa iji gosipụta ozi na ileba anya. Ruo ugbu a, ọ nyere anyị ohere igosi ozi gbasara enyemaka, ele satịlaịtị na ọkọlọtọ. Ugbu a, anyị nwekwara ike ịgbakwunye na ha niile ozi gbasara Nlele Street.
Tupu ịgbakwunye ọkwa ozi ọhụrụ a, chọpụta ma ọ bụrụ na otu ebe nwere ọrụ Street View ọ bụ odyssey, ebe ọ bụ na anyị ga-pịa ebe a kapịrị ọnụ ma chere ka usoro acha anụnụ anụnụ nke ọrụ a ga-apụta.
A gbakwunyewo Street Street dị ka akwa ọzọ, a oyi akwa na anyị nwere ike rụọ ọrụ ma deactivate dị ka anyị mkpa anyị, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ na ihe karịrị otu oge, anyị enweghị mmasị n'eziokwu ahụ bụ na ụdị ozi a na-apụta mgbe ọ bụla anyị na-ele map.
Etu ị ga-esi rụọ ọrụ akwa Street Street na Google Maps
Rụọ ọrụ Street Street oyi akwa na Google Maps bụ usoro dị mfe ma ga-ewe obere sekọnd.
Na mbu, ozugbo anyị meghere ngwa ahụ, anyị ga-pịa bọtịnụ ebe egosipụtara ụdị maapụ dị iche iche anyị nwere.
Na-esote, na ala nke igbe menu, anyị ga-akara akara Street Street, ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ gosi ebe ozi a dị na maapụ ebe anyị nọ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwepu ya, naanị anyị ga-pịa na Street Street oyi akwa ọzọ ka a ghara igosi ozi a na maapụ.
A na-atụ aro ya nwee nhọrọ a mgbe niile nwere nkwarụ ma ọ bụrụ na anyị anaghị eji ọrụ a mgbe niile, ebe ọ nwere ike bụrụ ọgbaghara nwere ọtụtụ ozi dị na ihuenyo ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Maps na-agbakwunye oyi akwa Street View na ngwa ahụ, anyị na-egosi gị otu esi arụ ọrụ
OnePlus na-ebipụta ngwa Zen Mode na Storelọ Ahịa Play iji kwụsị omume ọjọọ